J: Funny - Animal Dancing dog Gin
ဖတ်သွားကြည်.သွားတယ်။ J..အံသြမိပါတယ်။ အက ကို ရော။ သင်ပြ သူ ကို ကော။ အခု လို တခန်း တနား တင်ပြ တာ ကို ရော ။ ဒိုင် တွေ ကို ကော.သေချာ လာအားပေးတတ် ပိရီသတ် ကို ကော…..။
she put yur blog as her list. glad for you.
မမြတ်နိုးကိုလည်း လင့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
kwi လည်းအဲဒီအစီအစဉ်ကို အရင်လက ကြည့်ဖူးပါတယ် ။ခွေးလေးကိုလည်း သဘောကျတယ်။ တခြားပညာရှင်တွေကိုလည်း သဘောကျတယ် ။ အကုန်နည်းပါးပဲ။ အမေရိကားမှာလည်း အဲလို အစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်။ အားရင်အဲဒါလည်း တင်နိုင်ရင် တင်ပေးပါ။ ကြည့်ချင်လိုပါ။ ပို့စ်အတင်ကြဲလှချည်လား။ မျာများတင်ပါ။ အားပေးနေပါတယ်. ဒီရက်ပိုင်းအလုပ်များနေလို့ မလာဖြစ်တာခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျနော် ဆီဗုံးဖြုတ်တာက နှတ်ဆက်သံတွေကို အမြဲ သိမ်းထားချင်လို့ ပါ။
ပို့ စ်အတင်ကြဲတာက သတင်းကောင်းမရလို့ ပါ။ ရေးထားတာတွေ ရှိပါတယ် ရက်ခြားပြီး ပေါ်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။
x-factor တိုင်းမတင်ပါဘူး။ ရယ်စရာကောင်းမှ ဗဟုသုတရမှ ထူးခြားမှ တင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တော်ရုံ ကို ဘာသာမပြန်ဖြစ်ပါဘူး
လာရောက် အားပေးတဲ့ ဘော်တကာ အပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်သဗျာ